mpianatra (eo ho eo.) : 39000
Aza adino ny discuss Yonsei University
Yonsei University nanokatra ny varavarana ho maoderina fampianarana ambony ny taonjato iray lasa izay. Manana nanomboka teo tahaka ny firenena nipoitra ny ambony sy oniversite tsy miankina laharana eo amin'izao tontolo izao ny oniversite malaza indrindra. Fanorenana eo amin'ny tantara sy ny fomban-drazana, Yonsei dia mavitrika hanenjika hoavy vaovao. Mitady ny hahita ny toerana ao amin'ny karazany ny civilizational tetezamita, Yonsei dia hitarika ny manaraka 100 taona ary manorata tantara vaovao.
Yonsei University izao miditra ny izao tontolo izao ny unimagined mety. Ao amin'ny tafio-drivotra ny fiovana goavana, ny fampandrosoana haingana ny fifandraisana sy ny teknolojia ara-tsiansa indrindra indrindra no reshaping ny oniversite fampianarana sy ny fikarohana tontolo iainana tanteraka. Ny fangatahana dia mamontsina ho modely fampianarana vaovao izay manohana ny taranaka tokony hiaina mba ho 100 taona. Noho izany, Yonsei University dia fanavaozana ny fikarohana, rafi-panabeazana, ary ny fanohanana ny fitantanana mba hitarika ny fomba nandroso-misaina fikarohana sy ny fanabeazana ho an'ny fiaraha-monina ny fiovan'ny.
Tena manokana fotsiny manome fahalalana, tahaka ny fanao amin'ny orinasa fiaraha-monina ny lasa, dia izao ho hanimba mpianatra izay ho velona mba hahita ny fitodihan'ny taonjato vaovao. Na dia ao anatin'ny vanim-potoana izay solon-tsaina mihoatra noho ny fandroson'ny ara-pahalalana olombelona fahaiza-, Yonsei no hamaly ny antso manome vàhana ny famoronana fahaiza-manao izay mety ihany no ho ataon'ny olombelona. Yonsei no fampivelarana samihafa fandaharana mba hahatonga famoronana ao amin'ny "network fiaraha-monina." Amin'ny vanim-potoana maoderina, fifandraisana tsy tapaka ny faritra samy hafa ny fahalalana sy ny fahaizany manorina tambajotra izay manome fomba vaovao tanteraka endrika fahalalana sy fomba fijery.
Ohatra, fizika dia efa mandroso ny teoria sy fahaiza-manao ara-teknika ny nanotechnology no namaky sakana eo madio siansa sy ny teknolojia ampiharina. Fiaraha-miasa eo amin'ny humanities sy ny siansa voajanahary no nitondra momba ny fanavaozana izay takatry ny saina teo aloha. Noho izany dia zava-dehibe ny departemanta tetezana ny mizara sy hamporisika fifanakalozan-kevitra eo mpikaroka hafa saha. Hatramin'ity farany ity, Mino ny maha zava-dehibe ny fanamorana "extelligence,"Ny fanatsarana ny faharanitan-tsaina ny alalan 'ny efa voavitrana ny raha tsy izany tafasaraka mamirapiratra hevitra. Famoronana Tsy fotsiny ny fahaiza-manao ny intangible azo tsapain-tanana, fa dia ny fahafahana handray ny zavatra efa misy ka manao zava-baovao amin'ny alalan'ny tambajotra fandroson'ny ara-pahalalana.
Any aoriana, fiaraha-miory sy ny fifampizarana dia ho zava-dehibe toy famoronana hevitra. Yonsei handroaka ny ezaka mba hiatrehana izany "Nangoraka fiaraha-monina" amin'ny alalan'ny fitaizana ireo mpitarika izay manao fizarana. Ao anatin'ity fiaraha-monina ny hoavy, ny fikatsahana tombony manokana, no ho solon'ny amin'ny fifanajana sy ny fizaràna ny fifaliana sy ny alahelo amin'ny hafa; ny fiaraha-monina dia manilika hiala amin'ny "tafavoaka velona ny sahaza indrindra" toe-tsaina, ary tazano tena-teny, ary ny zon'ny tsirairay dia hiverina ho collectivism. Ny mpanorina ny Yonsei nambolena ny tena ilaina ny handeha mihoatra ny fizarana fotsiny loharanon-karena ara-nofo sy ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny fizarana mpitarika. Fanamby sy ny zavaboary, fifandraisana sy ny fiaraha-miory, ny fizarana sy ny fiheverana, fanandevozana sy ny fanajana. Ary izao no fitsipika izay mitondra miaraka amintsika isika, toy ny mpitarika ny ho avy, ary mampihatra sy hanohana tahaka Yonseians. Miaraha miaraka Yonsei amin'ny fitarihana ny lalana mankany amin'ny hoavy.
College ny Dentistry
College ny Medicine(freshman)
College ny Dentistry(freshman)
School of Integrated Technology, College ny Engineering
Graduate School of International Fianarana
Graduate School ny Fampahalalam-baovao
Graduate School Filazam-Administration
Ianao ve mila discuss Yonsei University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra